Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay ny rà latsaka…” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “Ampy izay ny rà latsaka…”
24/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mila fitoniana ny firenena ahafahana manatanteraka hatrany ny asa fampandrosoana raha ny nmabaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ny seranan-tsambon’i Toamasina omaly. Efa be loatra ny rà latsaka teto amin’ity firenena ity, ary izany no heverin’ireo mpanao politika sasany fa ahazoana ny fahefana. Fiheverana diso raha ny nambaran’ny filoham-pirenena hatrany. Tokony hatsahatra araka izany ny fanaovana sorona ny mpiray tanindrazana aminy alalan’ny fampiasana herisetra hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Nasiany resaka ihany koa ny momba ny lalàm-pifidianana izay nataon’ireo depiote mpanohitra fitaovana entona hanakorontanana ny firenena. Efa tamin’ny taona 2016 no nisokatra ny fifampiresahana sy ny adihevitra tamin’ireo hery rehetra teto amin’ny firenena ny momba ity volavolan-dalàna ity, ary samy nandray anjara tao avokoa ny rehetra raha ny nambarany. Mahagaga anefa ankehitriny, ary mampametra-panontaniana hoe misy matahotra fifidianana ve amin’ireto mpanao politika ireto no miezaka mamboly korontana eto amin’ny firenena toa izao? Sa ihany koa hoe matahotra ny fampiharana ny demokrasia? Na mpanohitra, na ny mpitondra dia ny fanatanterahana ny fifidianana ihany no hampanjaka ny filaminana sy ny fampandrosoana ny firenena raha ny nambaran’ny Filoha.
Niantso ny olom-pirenena rehetra araka izany ny filoham-pirenena ny amin’ny tokony hanoherana ny herisetra sy ny fifampihantsiana, hanohitra ny fanonganam-panjakana, ary hitodika any amin’ny fampandrosoana ny firenena. Niaraha-nahalala mantsy fa tsy nitondra afa-tsy ny fitotongan’ny fari-piainan’ny Malagasy sy ny toe-karena nandritra ny 50 taona. Misokatra amin’ny fifampidinihina araka izany ny Filoham-pirenena ny amin’izay fanatsarana rehetra. Iaraha-mahalala ihany koa fa efa malalaka ankehitriny ny fanehoan-kevitra amin’ny alalan’ireo haino aman-jery maro eto amin’ny firenena. Tokony ho samy ahatsapa tena anefa ny rehetra ka tsy hivoy afa-tsy ny hevitra momba ny fihavanam-pirenena, indrindra hevitra ho any amin’ny fampandrosoana hialana amin’ny fahantrana lalina. Nanome toky fa hitarika ny vahoaka malagasy amin’izany fampandrosoana izany hatramin’ny farany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Fanafoanana ny Kolikoly : Dinihin’ireo filoham-pirenena any Addis- Abeba
Omaly no nisokatra sy nanomboka tamin’ ny fomba ofisialy any Addis-Abeba renivohitr’i Ethiopie ny fivoriana an-tampony andiany faha-30 izay atrehan’ireo filoham-panjakana miisa 55 aty Afrika, miara-dalana amin’ ity fihaonana ity ihany koa ireo fifanakalozana maro ...Tohiny